Taariikhda My Butros » Secret of Kiss a Great
Last updated: Sep. 16 2020 | 2 min akhri
Dhunkasho waa madadaalo iyo markii loo sameeyo xaq u, dhimbilo ay duuli doonaa oo aad tegi doontaan aamusay rafiiq. Laakiin sidee baad u qaadato Dhunkashada in heerka ku xiga? Hoos, waxaan ku soo bandhigay qarsoon ee dhunkasho weyn.
Secret #1: Foorjaynta
Qaadashada waqti aad ku diirsado hor dibnaha dareysa ka caawisaa in la dhiso ilaa filaayo. Ha ahaato gacmaha haysta, qooqaya, ama ku xoq Dhabarkooda, xiriir muuqda ka hor dhunkasho dhabta ah waa qarsoodi ah oo kaa caawin doona dareenkuba wadaago dardar oo ay weheliyaan Galinaynaa aad xiriir.
Secret #2: Isdeji
Dhunkasho, xitaa haddii aad jeer boqol dhunkaday, noqon karaan kuwo ku xirtey dareemayaasha. Muhiimka ah waa in aad isku dejiso. Xusuusnow in aad neefsato qoto dheer, maskaxdaada sahal, oo naftaada ku kalsoon tahay.
Secret #3: Faruuryaha
La bushimahaaga ahayn dhunkashada Ma wax. Nuugo ama si tartiib ah cuntooyinka la-hawlgalayaasha bushimahaaga waxaa laga hubin doona inuu ka kaxeeyo waalan la xiisad galmada. Farsamo kale oo bushintiisa diiradda-waa in uu ordo caaradda carrabkaaga khafiif ah bushimahooda ayay ka badan. Markii aanu aad dhunkashada qaado, cadaadiska iyo xawaaraha dhunkasho ka duwan caawisaa in la abuuro farax sida lamaanahaaga ma ogaan doono waxa soo socda soo socda.
Secret #4: Dhagaha, Sanka, Indhaha, iyo Luqunta
Iyadoo dhunkashada waxaa caadi ahaan diiradda bushimaha oo aan ahayn meesha kaliya ee waa in aad diiradda saaraan. Aad la-hawlgalayaasha dhegaha Dhunkasho, hubiso, sanka, Oo daboolka indhahoodana dhan caawiyo inuu ka soo leexdo dhunkasho caadiga galay Naciimo taataabtay. Haddii aad rabto in aad kor u qaado uruursanayey, isku day playfully qaniinay ay cakaw iyo qoorta. Kaftan Meelahaa gaar abuuran dareenada iyo dareenka cusub in dari doonaa baahida iyo xooga aad dhunkan ay qorshaynayeen.
Secret #5: Dareenku
In kasta oo qarsoon kor ku caawin kartaa qof galay kisser weyn, qarsoodi ugu weyn oo dhan been ah in aad dareenka iyo ku xidhnaanta lammaanahaaga. Si aad u aragto rashka halka dhunkashada, naftiinna u leeyihiin in ay hadlaan in midba midka kale. By wadaago sheekooyinka saaxiib iyo Xusuus, cabsi iyo hami, iyo ogolaanshaha aad dareenka run muujiyaan, jidadkooda oo dhan si ay u qaadato xiriir si heer qoto dheer. Iyada oo ay tani cusub, dareenka dhigi doonaa inaad nugul, tani waa mid ka mid halis noqon doona u qalantaa.
Dhunkashada waa hab cajiib ah oo tusaya in aad qof gaar ah oo kaliya inta ay macnaheedu in aad. Iyadoo siraha kuwaas, falkan saaxiib beddesho kartaa xiriirka galay xiriir qoto dheer in aad dooni.